ကလေးငယ်တွေရဲ့အရိုးအထူးကုဖိနပ်နှစ်ခုကိုဘယ်လိုကြိုက်သလဲ။ မရရှိလျှင်မည်သည့်အကြံပေးချက်ကိုသင်အကြံပြုမည်နည်း။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်၏ခြေထောက်ပုံပျက်မှုအတွက်မှန်ကန်သောဖိနပ်ကိုသင်မည်ကဲ့သို့ရွေးချယ်ခဲ့သနည်း။ twiki- ...
အိမ်တွင်အသံကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ? YouTube ဗွီဒီယိုများရှာပါ။ တကယ်တော့ဒါဆို .. ဆရာဝန်ဆီသွားပါ။ (ဆိုလိုတာကခွဲစိတ်မှုလုပ်တဲ့သူဆီကိုသွားတယ်။ မေ့သွားတယ် ... )
ကလေးသည်ပါးတွင်နာကျင်မှုများပါးတွင်နာကျင်မှုသည်ရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ပါးတွင်နာကျင်စေသည့်အကြောင်းရင်းများပါးပြင်တွင်နာကျင်ခြင်းက pulpitis, caries, periodontitis နှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ …
Diaskintest ဟာ Mantoux လိုပဲမကောင်းဘူး၊ ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်နီခြင်းဖြစ်သင့်သည်ကိုကြည့်ပါနှင့်ဤသည်ပုံမှန်ပါပဲ။ မီလီမီတာ (၂၀) ​​မီလီမီတာအထိ (အချင်းအနီ) ။
Otipax ပြန်လည်ကျဆင်းသွား - ဘယ်သူအသုံးပြုခဲ့သလဲ အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ အားလပ်ရက်မှာနားရွက်နာလာတယ်။ တစ်နေ့ကို ၃ ကြိမ် ၃ ကြိမ်ကျွတ်လိုက်တယ်။ မင်းဘာကြောင့်သွားရမလဲလို့တွေးမိတယ်။
မတည့်သည့်အဖုအပိန့်များရှိသောကလေးကိုသင်ရေချိုးနိုင်ပါသလား ??? တန်းဝင်ကာစီသည် !!! ဟုတ်ပါတယ်။ အရေပြားကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးကလေးသည်မီးအပူချိန်အလွန်အမင်းမပူသင့်ပါ။
လျှာအောက်ရှိဇက်ကြိုးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းသင်လျှာကိုမြှင့်ရန်လိုအပ်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ သို့သော် ၁.၅ နှစ်အရွယ်တွင်ကလေးတစ် ဦး သည်၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ကူညီရန်လိုအပ်သည်။ ...
ကြွက်နို့ကိုကလေးတစ်ယောက်မှမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း။ ၎င်းကိုအရေပြားအထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ၌သင်မီးရှို့နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် celandine သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ကြွက်နို့။ သူတို့ဖြစ်ပေါ်မှု၏အကြောင်းရင်းများကိုအပြည့်အဝနားမလည်ပါ။ ဒါဟာလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ယူဆနေသည်
ဒါကဘာလဲ ecticide ဆိုတာလဲနှာခေါင်းထဲကိုကျပြီး + ရေနည်းနည်းငန်တဲ့ရေနဲ့နှာခေါင်းထဲကိုတစ်စက်ကျသွားတယ်။ သို့မဟုတ်စမ်းကြည့်ပါ - ရေဆူဖန်ခွက်တစ်ခွက်တွင် furacilin ဆေးပြား ၅ လုံးကိုဖျက်သိမ်းပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှမာကျူရီကိုမည်သို့နှင့်မည်သို့ဖယ်ရှားနိုင်သနည်း။ ယူနိုက်တက် Taurine Methionine ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး မှကုသပေးသင့်သည်။ နှင့်လည်းရောဂါဖြစ်စေခြင်းငှါ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှမာကျူရီကိုဖယ်ထုတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ပြီးတော့ ...
adenoids အတွက်ဆေးဝါး ၁။ ပွင့်လန်းသည့်အခါ celandine၊ အသားကြိတ်စက်တစ်လုံးထဲညှစ်ပါကဖျော်ရည်ကိုညှစ်ပါ။ ဖျော်ရည် 1 တစ်စက်ရေ 1 ပေါက်။ 20. adenoids ကုသမှုများအတွက်ပျားရည်နှင့် beets အရောအနှောဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ လအရွယ်ကလေးငယ်တွင်ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲအပူချိန် ၃၈.၅၊ ဘယ်ကလဲ ?? မင်းကိုအိမ်မှာဆရာ ၀ န်ခေါ်ထားတယ်လို့မယုံဘူး။ လူနာတင်ကားခေါ်ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၃ မတိုင်ခင် ...
3 နှစ်အရွယ်ကလေးအားထိရောက်သောချောင်းဆိုးဆေးညွှန်းပေးပါ။ ခြောက်သွေ့သောချောင်းဆိုးတစ်ခါတစ်ရံအော့သို့ရောက်တတ်သည်။ တခါတရံသည်သူ၏လည်ချောင်းရှင်းလင်းရေး။ အကူအညီကြိုးစားပါ၊ အကယ်၍ သင်သည် md ဓာတ်မတည့်ပါက၊ 1 မုန်လာဥဖျော်ရည်တစ်ခွက်နှင့် 2-3 tbsp ... ကြိုးစားပါ။
၉ လသားအရွယ်ကလေးငယ်အတွက်နှာရည်ကိုကုသရန်အကောင်းဆုံးနည်းကားအဘယ်နည်း။ ထိုကဲ့သို့သောကလေးငယ်၏နှာခေါင်းသည်သူနှင့်သူ့မိဘများအတွက်တကယ့်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။ စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်။ နောက်တစ်ခု - vasoconstrictor မှ ...
3 နှစ်အရွယ်ကလေးတစ် ဦး အတွက်နှာရည်ကိုကုသရန်အကြံပေး? ငါ (ငါ့ထံသို့ 7,5 လအတွင်း) ငါ့သားကိုကုသ, Vibrocil ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်ဆရာဝန် mom, နှင့်အတူသူ၏ဒေါက်ပွတ်နယ်နှင့်အတူတစ် ဦး ယုန်နှာခေါင်းကုသပေးခဲ့သည် ... သင်ကြယ်ပွင့်နှင့်အတူနိုင်ပါတယ်။ မတိုင်မီ…
ဆရာဝန်တွေက Giardia ကဘာလဲ၊ ဘယ်လောက်အန္တရာယ်လဲ၊ ဘယ်လိုကုသရမယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ La # 769; mblii, ဒါမှမဟုတ် zhia # 769; rdii (lat.Giardia) ကပ်ပါး flagellate ကန့်ကွက်သူများက Diplomonadida အမိန့်မှအသည်းနှင့်အူအတွင်းရှိကပ်ပါးကောင်များနှင့် ...
ကလေးသည် ၂.၂ နှစ်ဖြစ်သည်။ ၀ မ်းဗိုက်ကချောင်းဆိုးတာကိုနာကျင်စေတယ်၊ ​​အရာရာတိုင်းဟာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာတယ်၊ ပြီးတော့အော်ငေါက်တယ်၊ လည်ချောင်းကိုပွတ်သပ်တယ်၊ မိန်းကလေးငိုနိုင်တယ်၊ မင်းကမင်းကိုအာရုံလွဲသွားနိုင်တယ်။
ငါ့ကလေးကအကှေ့အဆို့မကှဲစှာသောရောဂါရှိနသေညျ။ အဲ့ဒါဘာလဲ? ဖြစ်နိုင်သည်ဟုနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်သည် .... AB ပိတ်ဆို့ခြင်းရှိမရှိကြည့်ပါ .... 3-4 ဒီဂရီ ... sinus node ကိုကမောက်ကမဖြစ်မှု bradycardia နှင့် tachycardia ၏အခြားကာလအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, ပေါ်ထွန်း ...
Polyoxidonium ကျနော်တို့ immunoxologist ကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ပေါင်းစပ် Polyoxidonium suppositories ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုကျိန်းသေအပြုသဘောဖြစ်ပါတယ်။ မင်းကိုလည်းကူညီပေးပါရစေ။ အဲဒါကငါတို့ကလေးကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့သူ့ကိုထည့်ပေးခဲ့တယ်။
အသက် ၂ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်မှာအပူချိန် ၃၈.၅ ရှိပြီးလည်ချောင်းထဲမှာအနီရောင်လည်ချောင်းနဲ့အူကြောင်ကြောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ပိုမြန်အောင်ကုသနည်း။ ပ.ိဇီဝဆေးမပါဘဲငါလုပ်နိုင်သလား။ အစားဆရာဝန်ဆီပြေးပါ၊ သင်ဒီမှာရှိကုသမှုနည်းလမ်းအားလုံးကိုစမ်းသပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,782 စက္ကန့်ကျော် Generate ။